कोरोनाभाइरस संक्रमितको उपचारका लागि चीनले ६ दिनमा अस्पताल निर्माण गर्ने ! « हातमा खबर-जहाँ तपाइँ, त्यहीं खबर
कोरोनाभाइरस संक्रमितको उपचारका लागि चीनले ६ दिनमा अस्पताल निर्माण गर्ने !
प्रकाशित मिति : २०७६, ११ माघ शनिबार २१:३८
अहिलेसम्म चीनमा ८३० जनामा कोरोनाभाइरस लागेको पुष्टि भएको छ, जसमध्ये कम्तीमा ४१ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। १ करोड १० लाख जनसङ्ख्या भएको वुहानबाट यो सङ्क्रमण सुरु भएको थियो।
राज्य नियन्त्रित सञ्चारमाध्यमका अनुसार नयाँ अस्पतालमा १ हजार शैय्या हुनेछन्। चिनियाँ राज्य नियन्त्रित सञ्चारमाध्यमले प्रकाशित गरेको भिडिओ फुटेजमा २५,००० वर्ग मीटर क्षेत्रफल रहेको अस्पताल निर्माण क्षेत्रमा डिगरहरू देखाइएका छन्।
हुआङले भने- समयमै योजना सम्पन्न गर्न देशका विभिन्न भू-भागबाट इन्जिनियरहरू ल्याइनेछन्। “चीनमा इन्जिनियरिङ कार्य राम्रो छ। त्यहाँ एकदम द्रुत गतिमा अग्ला भवन बनाइएको रेकर्ड पनि छ। यो पश्चिमाहरूका लागि अकल्पनीय छ। त्यो गर्न सकिन्छ,” उनले भने।
औषधिजन्य पदार्थ भने वुहानले अरू अस्पताल वा फ्याक्ट्रीबाट सजिलै ल्याउन सक्नेछ। शुक्रवार द ग्लोबल टाइम्सले चिनियाँ सेनाका १५० जना स्वास्थ्यकर्मी वुहान आइपुगेको पुष्टि गरेको थियो। तर तिनले नयाँ अस्पतालमा काम गर्ने हुन् कि होइनन् भन्ने कुरा भने उसले पुष्टि गरेको छैन।
उक्त अस्पताल बनाउन ४००० मान्छेले दिनभर र रातभर काम गरेको चाइना डटकम डट सीएनले जनाएको छ। त्यहाँ एक्स रे कोठा, सीटी कोठा सघन उपाचार कक्ष र प्रयोगशाला थियो। हरेक वार्डमा आफ्नै शौचालय थियो।
दुई महिनाभित्रै अस्पतालले देशभरका सात भागमा एक भाग सार्सका बिरामी भर्ना गरेको थियो। त्यसलाई राज्य नियन्त्रित सञ्चार माध्यमले “औषधिक्षेत्रको इतिहासमा जादु” भनेर प्रशंसा गरेको थियो।
उनले भनिन्, “यो उच्च प्राथमिकतामा परेको विषय भएको हुनाले म त्यसको भार वुहान सरकारलाई पर्छ भन्ने कल्पना गर्न सक्दिन।” हुवाङका अनुसार “प्रकोप समाप्त भएपछि उक्त अस्पताल चुपचाप बेवारिसे बनेको थियो।”